फर्मवेयर कोडिंग - शेन्ज़ेन Fumax टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
Fumax फर्मवेयर कोडिंग टोलीले ग्राहक आवश्यकताहरुमा आधारित विशिष्ट फर्मवेयर लेख्दछ। फर्मवेयर हार्डवेयर (पीसीबीए) मा प्रोग्राम हुनेछ जुन फूमाक्स हार्डवेयर इञ्जिनियरि team टोली द्वारा डिजाइन गरिएको हो। प्रमाणिकरणका लागि पूर्ण काम गर्ने उत्पादन ग्राहकलाई खरीद गरिनेछ। यो कत्ति रमाइलो हुन्छ, ग्राहकलाई नयाँ विचारहरू वास्तविक वास्तविक उत्पादनको लागि हेर्नका लागि!
Fumax सँग काम गर्दै, आफ्नो विचार वास्तविकतामा बदल्नुहोस्!
माइक्रोकन्ट्रोलर सफ्टवेयर फ्यूमेक्स टेकको एक मुख्य योग्यता हो, र हामी काम गर्ने अधिकांश उत्पादनहरूको मुटुमा। Fumax टेकको व्यापक microcontroller अनुभव र ज्ञानको अर्थ हामी प्रत्येक ग्राहकको विशिष्ट आवश्यकताहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रोसेसर सिफारिस गर्न र उपयोग गर्न सक्षम छौं।
हाम्रो अनुभवले कम उपलब्ध--बिट उपकरणहरू देखि उच्च प्रदर्शन मल्टिकोर -२-बिट उपकरणहरूमा सबै उपलब्ध माइक्रोकन्ट्रोलर विकल्पहरू समाहित गर्दछ।
Fumax टेक विभिन्न सयौं डिजाइन लागू गरीएको छ विभिन्न 8 बिट उपकरणहरू प्रयोग गरेर। यी साना तर शक्तिशाली माइक्रोकन्ट्रोलरहरू परिधीय उपकरणहरूको रूपमा काम गर्न सक्दछन् वा सम्पूर्ण ह्यान्डहेल्ड वायरलेस प्रणाली ड्राइभ गर्न सक्दछ। १--बिट प्रोसेसर प्राय:--बिट र -२-बिट उपकरणहरू बीचको एक आला क्षमता भरिन्छ। -२-बिट उच्च प्रदर्शन प्रोसेसरहरू एम्बेडेड लिनक्स® वा विन्डोज एम्बेडेड चलाउन र नेटिभ ईथरनेट ईन्टरफेस, ठूलो एलसीडी डिस्प्ले, टचस्क्रीन, र विशाल सम्झनाहरूलाई समर्थन गर्न सक्दछन्।
Fumax टेकको microcontroller सफ्टवेयर टीम तपाइँको आफ्नो परियोजना को अवधि को लागी काम गर्दछ। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर चरणको बखत हामी प्रणाली आवश्यकताहरूको मूल्याate्कन गर्छौं र कामका लागि इष्टतम प्रोसेसर चयन गर्दछौं। हामी हार्डवेयरको साथ सफ्टवेयर एकीकृत गर्न बिजुली टीमसँग काम गर्दछौं, र नयाँ बोर्डहरूको द्रुत प्रमाणिकरण परीक्षणलाई अनुमति दिन टेस्ट कोड सिर्जना गर्दछौं। हामी प्रणाली परीक्षणको माध्यमबाट सफ्टवेयरलाई समर्थन गर्दछौं र उत्पादन ढुवानीको लागि प्याकेज हुनु अघि राम्रोसँग अपरेशन प्रमाणित गर्न टेस्ट कोड विकास गर्न सक्दछौं।
तल MCU कम्पनीहरूको सूची छ जुन हामीले पहिले प्रयोग गर्यौं।
पश्चिमी MCU कम्पनीहरू:
ताइवान MCU ब्रान्ड:
चिनियाँ स्थानीय MCU:
चीन धन, www.sinowealth.com